Prahovské Rocks, Prachovské skály, Prachov Rocks - Jičín
Eoropa Repoblika Tseky Jicin
Adiresy: 506 01 Jicin, Repoblika Tseky
Ny natioran'ny Repoblika Tseky dia mety hahagaga ny mpizahatany rehetra. Ankoatra ny tendrombohitra ambany, fa ny tendrombohitra malaza, farihy mahafinaritra sy zohy miafina, dia misy toerana tsy mahazatra toy ny prahovskie. Ity famandrihana voajanahary ity dia hita ao amin'ny faritry ny Valan-javaboarim- paritra Tseky (Český ráj) ary malaza amin'ny vahiny vahiny.
Tsara kokoa ny mianatra mikasika ny lasa sy ny ankehitriny amin'ity valan-javaboary voajanahary ity hanampy ireto zava-misy manaraka ireto:
Ao amin'ny vanim-potoanan'ny vato ao amin'ny faritry ny famandrihana misy ankehitriny, dia nisy foko maro, araka ny asehon'ilay fasana hita.
Tonga saina tamin'ity faritra ity ny mpizaha tany sy ny mpahay siansa tamin'ny taonjato faha XIX: ny fitsangatsanganana voalohany dia natao tamin'ny taona 1880.
Ny toeran'ny famandrihana voajanahary dia nahazo ny Prahovskie Rocks tamin'ny taona 1933.
Ny anarana Prachovské skály dia avy amin'ny teny Czech Prach, midika hoe "vovoka". Ary tokoa, ny tany eto dia rakotry ny fasika maitso maitso maitso matevina toy ny vovoka.
Inona no mahaliana momba ny Rocks Prahovské?
Ny zavatra manan-danja indrindra izay manintona vahiny dia tsy dia mahazatra loatra ny fananganana sandstone. Nipoitra tsikelikely izy ireo ary niova tsikelikely, teo ambany fitarihan'ny rano, rivotra ary masoandro, nahazoana endrika hafahafa. Ho an'ny maro, tahaka ny rantsantongotra goavana maniry eny amin'ny lanitra izy ireo. Prakhov Rocks - tanàna iray feno vatolampy iray manontolo, izay misy andian-tsanganana avo roa heny. Ny manodidina azy dia ny ala honko, ary ao anatin'ny "tanàna" - sehatra , lalambe ary vatolampy.
Anisan'ny vato tena mahaliana indrindra ireto manaraka ireto:
Ny fanja Prahovskaya;
Ny tilikambon'ny Rector;
Hungry and Dubnov towers.
Mba hijerena sy hankasitraka ny hatsaran'ny Pochhov Rocks any amin'ny Repoblika Tseky dia mila mianika farafaharatsiny iray amin'ireo sehatra mpandinika izay ato. Avy eo dia afaka mankafy ny fomba fijery ianao amin'ny fampiononana, ary koa manao sary mahafinaritra. Ny malaza indrindra dia ny "Fijery momba ny Paradisa Tseky", misy toerana 7.
Ny vahiny ao amin'ny tahiry dia manana fahafahana misafidy iray amin'ireo lalana anankiroa ho fanaraha-maso ny fiangonan'i Prahovské. Samy hafa ny halavany sy ny fahaizany:
Faribolana lehibe (voamarika amin'ny endriky ny maina). Ny halavany dia 5 km, ny ora fitaterana dia 2,5-3 ora. Ny lalana dia ahitana tohatra sy tilikambo fiara, toeram-pandinihana 7 ary toerana maro hafa mahaliana.
Kitapo kely (mavo mavo). Ny halavany dia 2,5 km, ny fotoana dia 40-50 minitra. Mandritra io fotoana io dia hahita tilikambo roa ianao ary lalana iray eo anelanelan'ny vato, antsoina hoe "Corridor Imperial".
Misy ihany koa ny "fariboniny" boribory - faritra iray mifanandrify amin'ny kely sy kely, ary heverina ho tsara indrindra amin'ny fahasarotana. Na izany aza, na eto aza dia misy tranonkala roa izay tsy maintsy alehanao tsara. Etsy andaniny, tsy azo atao ny mamoy ny vatany any Prahovski.
Ny fidirana amin'ny tahiry dia aloany. Ny tapakila amin'ny vidiny feno dia handoavana 70 CZK ($ 3.24), tombontsoa (mpianatra, mpisotro ronono) - 30 CZK (1.39 $), fianakaviana (2 olon-dehibe sy ankizy 2) - 170 ($ 7.88).
Eo akaikin'ny fidirana ao amin'ny tahirin-tsambon'i Prakhov Rocks dia misy fiara roa ho an'ny fiara. Misy ihany koa fivarotana fahatsiarovana, trano fandraisam-bahiny, kafe kely ary foibe fampahalalam-baovao, izay ahafahanao mianatra momba ny lalana amin'ny antsipiriany ary mividiana karatra famandrihana.
Ahoana no hahatongavana any Prakhov Rocks?
Ny tahiry dia hita any amin'ny faritra atsinanana ao amin'ny paradisa Bohemian, 100 km miala an'i Prague . Ho tonga eto, mila miala ny tanànan'i Jicin eo amin'ny làlana Sobotka ianao. Ny lalanao dia handalo an'i Golin sy Prakhov, ny halavirana dia eo amin'ny 6 km. Ireo mpizahatany dia tonga eto miaraka amin'ny fitsangatsanganana voalamina, ao anaty bus na eo an-toerana: eny an-dalana dia afaka mifanena amin'ireo faritra tsy dia tsara kokoa noho ny ao amin'ny valam-paritra.
Ho any amin'ny prahovský vato avy any Prague, araka ny asehon'ny mpizahatany, dia tsy sarotra. Mila mampiasa ny fiara Prague- Mlada-Boleslav - Turnov na ny lamasinina Prague-Jičín.
Toeram-pisakafoanana any Riga
Biraon'ny vola madinika
Trano fonenana (Daugavpils)
Karazana voankazo masaka miaraka amin'ny holatra
Famoahana ny vata-mangatsiaka
Ahoana no hahatonga anao ho sambatra sy ho sambatra?
Fitsaboana ureaplasmosis amin'ny vehivavy
Ahoana ny famolavolanao jeans?
Miley Cyrus dia mihinana marihuana
Vato mahagaga - anarana
Fiakaran'ny kalesy ririnina
Youth Fashion 2014
Sakafo misy alikaola
Canape miaraka amin'ny tsaramaso
Ny vadin'ny vadin'i Chester Bennington dia nanapa-kevitra ny hitory ny fianakaviany amin'ny fanjakana